गर्भनिरोधक चक्की सेवनको तालिका छुटेमा के हुन्छ ? | रेडियो भरतपुर – Radio Bharatpur
Home स्वास्थ्य गर्भनिरोधक चक्की सेवनको तालिका छुटेमा के हुन्छ ?
गर्भनिरोधक चक्की सेवनको तालिका छुटेमा के हुन्छ ?
on: २०७६ श्रावण २९, बुधबार ११:४४ In: स्वास्थ्य
कसलाई आवश्यक छ चक्की ?
अब कुरा आउँछ कि यो चक्कि नियमित रुपमा सेवन गरिरहनुभएको छ । यौन क्रियाकलापमा पनि संलग्न भइरहनुभएको छ । गर्भवती हुन चाहनुहुन्न । यद्यपि भुलेर कुनै दिन तपाईंले यो चक्की लिन भुल्नुभयो । जतिबेला सम्झनुहुन्छ तत्काल अर्थात चाडो भन्दा चाडो चक्की सेवन गर्नुहोस् । जति चाडो गर्नुहुन्छ, खतरा उतिनै कम हुन्छ । अनलाईन खबरबाट
यहाँ अनौठो कारणले गर्दा भेला हुन्छन् ७० हजार सर्प
भाले चित्तल काटेर लुकाएको आरोपमा कुमरोजबाट एक जना प्रक्राउ ।।
२०७६ मंसिर ९, सोमबार १८:२३
क्लिन चितवन बनाउन विद्यार्थीलाई पढाउँदै चितवन प्रहरी
२०७६ मंसिर ७, शनिबार ०७:४२
प्रथम बार्षिकोत्सव क्यान्सर अस्पताल नर्सिङ्ग कलेजले मनायो
२०७६ मंसिर ७, शनिबार ०७:३८